Arrimaha aadka u yaryar ee farsamada ee Congress-ka ee sahanka - Geofumadas
arrimaha farsamo aad u yar Congress Agrimensura
Oktoobar, 2011 Leisure / waxyi, safarka
Hambalyo, naxariis, waxay ahayd shir runtii wax soo saarka, muhiim u ah Guatemala iyo xilli muhiim ah gobolka Central American. Ka hor intaadan ka hadlin dhinacyada farsamada ee dhacdada -in kaliya xiiseynayo akhristayaasha aan- oo aan la kulmi doono maalmaha soo socda, waxaan rabaa in aan ka faa'iidaysto in aan sii daayo wax ka mid ah macnaha guud ee xuriyada xorta ah ee aan awoodey in aan ka faa'iidaysto, taasina hubaal waxaad sii wadi doontaa qaybaha madadaalada iyo waxyoonaanta.
Waa wax cajiib ah in la maqlo codka dadka kale ee magaca Geofumadas, dallad yar oo aan ku soo qaatay munaasabadan. Waan ku faraxsan ahay in dadaal this ka baxsan ay ku bilaabatay sida Blog, hadda in ka badan 37,000 martida bil kasta in la tixgeliyo qaybta ay ka qaateen hadlayay macnaha geospatial, ka dibna ku soo laabtay dhiirigelin markii professor a kuu sheegayaa in ardayda u tixraacaan sida il waa la dhamayn kari la magaca qoraaga si qarsoodi ah. Waxyaabaha nolosha, inta aadan ka maqlin dadka kale, kama dareemeysid cabir weyn oo ku saabsan faallooyinka internetka ama weydiimaha su'aalaha. Si aan u dhamaysto doorashadan, waa inaan kuu sheegaa in ay ahayd mudnaan gaar ah oo la wadaagayo nacasta dadka la tixraaca arrimaha ku saabsan maareynta dhulalka sida Martin Wubbe de Kadaster, Diego Erba ee Machadka Lincoln, Javier Morales ee ITC, Mario Pimetto ee Cadastre de Córdova iyo Jean Roch Lebbeau ee SEGEPLAN.
Waxaan seegay sida gaadhay Quetzaltenango, saddex saacadood ah caasimadda ka badan isku day waqti in uu ka tago garoonka diyaaradaha ee magaalada a arrin ciriiriga inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa. stretch Tani waxa ay ku lug hadal ah oo ku saabsan jidka iyo qayb ka mid ah hurdo saamiyeed si ay isbedel ee height cirro, @ 14.66 toosan kiiloomitir iyo @113.47 in sare Delta arkay dhibic ka leexdo, xagga dambe ee dhabanka bidix xaq qaybaha Tottonapan ee gaadhaya mitirka 3,330 ee ka sarreeya heerka badda (ma aha wadada weyn).
Derejeeyo, Waxaan fahamsanahay in tani ay tahay jahawareer wayn muhiim ma aha in this article, laakiin waa qayb ka mid ah ay dib ugu noqonayaan, raadinaya sida daruurta dardartay cagaha 33,000 ku laayeen oo ka mid ah meelaha UTM 15N iyo 16N, baaritaanka GaiaGPS on iPad si aad u aragto waxa xambaarsan satellites ee height this iyo xawaaraha. Waxaan tuhmayaa si aad u hesho @Home, wiilasha ku wareegsan u ordaan oo ilxidhka sixir in ay soo saaraan 14 sano guurka iyo suurto gal ah in ka badan 17 ogahay inaad halkaas ka jiray raaxaysan. isku darka yaab leh oo ah waalli, hamiday iyo dhadhan tegayo in is ogow of muuqaalkaaga, taasoo duwan style of waalan in kale oo aaminsan in dhar waa kaliya looga baahan yahay in ay ka baxsan tag.
Waxaan idinku leeyahay, taasu wanaagsan tahay in la macallin dugsiga hoyga ah hore wadaagaan sanadihii college aan, kuwa coincidences weyn oo halkan ku nool Quetzaltenango laba bilood ka hor. Waxa xiiso leh, 24 sano ka dib cuni qoyskaaga oo wuxuu ku raaxaysan Jocom wanaagsan ah, cuntada ka mid ah gobolka this oo ay ku jiraan digaaga in maraq cagaar ah, ay berri la tortillas diiran, bariiska iyo shaaha qorfe uu ka samaysan yahay nafta furan polygonal oo aan samayn mayl ... xataa xitaa miisaanka dheeraadka ah. The threads in xidhxidhaan story this awood uma yeelan in ay ka fogaadaan i soo xusuuso daqiiqado of my carruurnimada, marka caadooyinka weli xun oo ka mid ah jabhada FMLN iga dhigay waxaad raadsataa xorriyad waddan kale oo lagu calaamadeeyey farxaddayda safarka.
In Quetzaltenango ayaan joogey Posada Bonifaz, kali waxaan dareemay shirkad aad u dhow sida aad halkaan joogtay. Meesha waxaa ka jira 1936, waa meel aad u daacad ah oo aan ku taliyo, ku xigta beerta iyo qayb ka mid ah macnaha aan laga fogeyn nalalka habeenkii iyo jaakad wanaagsan sababtoo ah qabow waa sheeko kale. Xarunta taariikheed ee taariikhiga ahi waa caddayn qiimo leh oo ku saabsan shaqooyin badbaado leh sannado badan oo ka mid ah degmada, dib u soo kabashada taariikhda taariikhda gumeysiga.
Kadibna waxaan sidoo kale arkay caddeyn kale oo qiimo leh oo ku saabsan sanadahaas oo ah Spanish Crown; Hermitage of El Carmen ee Salcajá; Kaniisadda ugu da'da weyn Kaniisadaha Ameerika, oo ay dhistay 1524 markii ay reer Spain ahaayeen kuwa duulaya; oo aan ahayn qasab maadaama ay hadda ku sameeyaan GvSIG Foundation laakiin leh isla hal jiheeye oo u muuqata inayan lumin doonaan marxaladda waqtiga.
Waxaan jeclaan lahaa in aan ku habboonaado wakhtiga caddaaladda, bisha August ee sanadkaan lagu sharfayo Saint Louis King of France; Waqtiga marka la raadinayo rizber aan la taaban karin; inkastoo maalin ubax bootin dumarka siday caruurtooda ay dhabarka, oo xiran dharka caadiga ah midabo: nooc ka mid ah canbuurkaaga yeedhay Güipil iyo wax u eg darafkii loo yaqaan Corte, sifooyin in ay ahayd kibirka xididada ma dhiman inkasta oo laamaha yaraa ay yar yihiin. Too xun ee qoob Palo Volador waxaa mar dambe ku dhaqma ee jirridda a qumman square ahaa pivot ee dambiisha ku noqnoqosho leh, kaas oo la sudhay laba qof oo fur loop a in dareenka dareento in ay maqan yihiin ma aha oo kaliya indhaha iyadoo loo marayo dhinac kasta π / 4. Waxay noqon doontaa wakhti kale oo aad iigu raaci kartaan, oo aan aado Rabin ama Baja Verapaz halkaasoo ay sheegaan in wali ay ku dhaqmaan.
Hadda waxaa jira jahwareer gaaban iskuulada, ciyaaraha farsamada, boorisyada iyo qaar ka mid ah iskudhafka ay Spanish u keeneen cayaaraha; Ma joojineyso inay fiicnaadaan haddii ay raacaan maraq wanaagsan oo digaag leh Pope Pope iyo is-dhaafsiga kaftanka wanaagsan caafimaad / la aqbali karo ciribtirka macaamiisha kaliya ee laga yaabo inay bartilmaameedsadaan Central Americans.
Sidaas curdan tahay, waxa ay ku dhamaadeen fudaysaday ee safar dheer oo iga tagay dhadhan wanaagsan, halkii loo eego dhaqanka wareegsan River Salama ah, Waa in aan qiro, way weyn tahay doorka dadka dhibaateeyay shuruudaha akadeemiga yoolka doorka ay ku leeyihiin duruufaha joogtada ah ee qaybta juqraafiyeed. Waxaa la yaab iyo qosol leh in dhammaan shaqada this in University of San Carlos ma aha in Ciudad Guatemala, sidaas inay magaalo chapina ugu muhiimsan labaad ka dhigaysa oo dhan degmooyinka in la isugu dooxada this qaadan caqabad weyn oo 10 soo socda sano Waan arki doonaa hadii sharaf magaalada qadiimiga ah ee Biisooyinka, markuu la odhan jiray Xelaju ka dibna afka Pedro de Alvarado Aztec yeedhay Tierra del Quetzal. Waxaan si cad ugu arkay wajiyada qaar ka mid ah ciyaartoyda oo kaliya sanadaha hore ee tartanka, waana wax u fiican qof walba.
Anigu waan xiiseynayaa, laakiin waa inaan ku soo laabto maaddadeyda sigaar cabba, taas oo aniga iiga haysata pica on caarada carrabka. Sidoo kale, waxay yiraahdeen qalabka elektaroonigga ah waa in la damiyaa, mana doonayo in aan iska qaado dareenka asalka ah ee markii ugu horeysay ee la bilaabay oo macnaheedu yahay dhammaadka dariiqyada iPad-ga. Sidaas, waad ku mahadsan tahay ururinta dhegaha sarreenkan, fahamtay waqtigaygii, oo igu raacay fekerkii safarkan. In daqiiqado yar aan dalka doonaa oo wanaagsan noqon mar kale maqashaan luqadda in kaliya adiga iyo Waxaan fahamsanahay, in waa ka jirey ka hor inta aan idinka hor yimid oo weli kiciya kuwa lamid ah ee ilmada beerka iyo lafo xanuun habeenkii.
Post Previous«Previous Cilmi baadhayaasha, Mashruuca Canshuuraha Guryeynta
Post Next Guatemala iyo caqabadkeedii si loo helo doorka Akademiyada ee Maareynta DhulkaNext »
3 Jawaab ah "Arimo aad u yar oo farsamo oo ka socda Congress"
... hubaal, dhowr ka mid ah jumladuhu waxay leeyihiin dedaal.
Waad ku mahadsantahay inaad raacdo meelahan oo aad ku qaadato in uu jiro.
Hi Rudy. Waxay ii ahayd farxad inaan idinla wadaago shirweynaha, anigoo ka qoomameynaya in waqtigu gaagaaban oo jadwalka la adkeeyay. Laakiin xaqiiqdii waxaa jiri doona waqti booqasho ama halkaas oo loo maro caasumada, ha noqoto kaldito ama koob qaxwo wanaagsan had iyo jeer dhadhamin wacan.
Salaan iyo sii wadida tartanka.
Rudy Ottoniel de León Manrique isagu wuxuu leeyahay:
Hello, magacaygu waa Rudy De Leon, oo waxaa qayb ka mid ah maamulka kulan dalka, waxaan ahay arday ka mid ah qeybtii labaad ee maamulka dalka ee Quetzaltenango iyo kuwa kibirka leh in ay ina Salcajá, ku soo koray ciyaaro agagaarka kaniisadda San Jacinto oo aadan aqoon u farxad aan dareemi og comment ku saabsan oo ku saabsan meeshii aan ku dhashay, haddii aan lahaa oo loo yaqaan aan u socday si ay u booqdaan intaydii Jannada dooni lahaa in ay wadaagaan aad ula hal galaas oo miro caldito iyo xoogaa yar oo shiraac in soosaarka gacmahaaga oo ah walaalkay farsamayaqaan ah, laakiin qalbigaygu wuxuu ka buuxsamayaa farxad si uu u ogaado qeyb ka mid ah waxa uu jecel yahay booqashadiisa waxa uu ahaa dad weyn oo Salcaja ah.